Maalin: Janaayo 18, 2020
Ayadoo la raacayo go’aanka Maamulka Magaalada Istanbul, Cusbada Cusmaan ee M2 Yenikapı-Hacıosman metro line waxaa loo xiri doonaa howlgalka inta u dhexeysa 12: 00-16: 30 berri. Wuxuu la wadaagay go’aanka ay qaadatay Go'aanka Maamulka Istaraatiijiyadda ee ka soo baxa akoontiga Rasmiga ah ee Istanbul Istanbul. sharing [More ...]
Iyada oo kaashanaysa Dawladaha Hoose ee Magaalada Kocaeli iyo Dawladda Hoose ee Kartepe, sannadkan dabaaldega barafka koowaad, ee lagu qabtay Sisli Valley ee degmada Maşukiye ee degmada Kartepe, ayaa ku dhammaaday nashaadyo xiiso leh. Dowlada Hoose ee Magaalada Kocaeli ee ka qeybgashay munaasabada [More ...]
Dab ayaa ka kacay magaalo-weynta Zincirlikuyu illaa Beylikdüzü ee Istanbul. Markii uu ka imanayay joogsiga Ça stoplayan, darawalka, oo arkay qiiqa ka soo baxaya qaybta matoorka gaariga, ayaa joojiyay taraxyada oo uu furay albaabadii wuxuuna ka daadgureeyay rakaabkii. Mashiinka metrobus-ka [More ...]
KarFest, oo loo soo agaasimey iyada oo lala kaashanayo Kocaeli Magaalo Weyn iyo Dawladda Kartepe oo ku marti-qaadi doonta howlo madadaalo iyo bandhigyo ka dhaca Kartepe, cinwaanka dalxiiska jiilaalka, ayaa laga bilaabay Sisli Valley. Bandhigyo aan la ilaawi karin oo dj ah, iftiin laser ah [More ...]
Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan wuxuu baaritaan ku sameeyay Mashruuca Galataport. Madaxweyne Erdoğan wuxuu ka soo guuray hoygiisii ​​Kısıklı una wareegey Mashruuca Galataport ee Beyoğlu. Helitaanka macluumaadka ku saabsan mashruuca socda, Erdogan, Gudoomiyaha Kooxda Doğuş iyo [More ...]
Duqa magaalada Keçiören, Turgut Altınok, wuxuu ku dhawaaqay in wareegga koowaad ee sanad dugsiyeedka 2019-2020 uu bilaash u yahay ardayda oo dhan iyo safarka ay ku tagayaan badda adduunka. Madaxweyne Altınok wuxuu fariintiisa ku yiri: “Inta simistarka socdo [More ...]
Gaziantep dhexdeeda, qiimaha gaadiidka dadweynaha ayaa si deggan loo kiciyey. Gaziantepist-ku waxay barteen safarka oo aan lahayn qoraal rasmi ah markay ka degenaayeen gaadiidka dadweynaha. Tigidhada buuxa ee basaska guud ee khaaska ah laga bilaabo Janaayo 18 (maanta) [More ...]
Nadiifinta iyo jeermis-ka-qaadashada howlaha gawaarida dadweynaha ee ku xiran İzmir Magaalo-weyne ayaa si aan kala go 'lahayn u socon. Faafidda cudurka hargabka, oo ku kordha bilaha jiilaalka, ayaa sidoo kale la isku dayaa in lagu yareeyo iyada oo la nadiifinayo daraasadaha. Izmir [More ...]
Gaziantep oo isticmaali doona line jira 49-ka kilomitir ah ee u dhexeeya Republic of Turkey Nizip Raybüs State Tareennada bilaabay tijaabinta ay driving. Raybüs, oo si guul leh ku dhammaystiray tijaabada wadista tijaabada isagoo ka yimid Gaziantep una yimid degmada Nizip qadka jira, Nizip [More ...]
Barta ayaa lagu riixay si ay u furato khadadka tareenka shirkadaha gaarka loo leeyahay iyadoo TCDD ay la tartami doonto waaxda khaaska ah xarkaha laga bilaabo 2021. SözcüSida ku xusan warbixinta Ergeyga Süzer; “Ka dib markii xamuul xamuul oo laga qaado tareenka, rakaabka rakaabka sidoo kale waa mid gaar ah. [More ...]
In kasta oo xaqiiqda ah in Guddoomiyaha Karabük Fuat Gürel uu bilaabay inuu shaqeeyo ilaa dhammaadkii usbuucii la soo dhaafay, wuxuu ku yaal xarunta Keltepe Ski Center, taasoo sababtay xiisaha weyn ee kumanaan muwaadiniin ah oo ka kala yimid Karabüklü iyo degsiimooyinka kale ee gobolka. [More ...]
Golaha Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir ayaa si wada jir ah u go’aansaday inay soo iibsadaan 52 bas oo cusub oo loogu talagay gaadiidka dadweynaha. Markaa, tirada basaska lagu daro gaadiidka dadweynaha ayaa kordhay 152 sanadkan. Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir 2020 [More ...]